शुक जसले ट्रक दुर्घ’टनामा डेढ वर्षीय छोरा श्रीमती सहित परिवार गु’माए : अझै हो’स खुलेको छैन् ! – Onlines Time
April 8, 2021 onlinestimeLeaveaComment on शुक जसले ट्रक दुर्घ’टनामा डेढ वर्षीय छोरा श्रीमती सहित परिवार गु’माए : अझै हो’स खुलेको छैन् !
जिल्ला अस्पताल भवन बनाउन सिमेन्ट बोकेर उकालो लागिरहेको ट्रक मनाङको नासों गाउँपालिका ४ कोतोमा पुग्दा नपुग्दै ब्रेकमा समस्या आयो । पहाडको अप्ठ्या’रो बाटो त्यसमाथि ‘हे’भ्भी वेट’ ट्रक ।
बु*डो बिदेशमा बु*डि यता सो*ल्टीसंग मो*ज गर्दा गर्दै पक्रा *उ, बिदेस बाट आएको ६ दिन मै आ*त्मह*त्या (भिडियो हेर्नुहोस)
March 2, 2021 March 2, 2021 puspa